तिथि मेरो पत्रु » राशिफल साइन गरेर एक पहिलो तारीख मा के पहनना
तपाईं एक पहिलो तारीख मा जानुहुन्छ, तपाईं शायद रूपमा चाँडै विचार पहिलो कुरा तपाईं यो छ सुरक्षित छु रूपमा, "के म सकिरहेको छु?!"या कम से कम, यो तपाईं को विचार पहिलो कुरा एक हो. तपाईं लगाउने के मा सहज हुन चाहनुहुन्छ, तर तपाईं पनि पक्का तपाईं बाहिर जा भएको व्यक्तिको अपमान छैन बनाउन चाहन्छौं, र तिनीहरूले तपाईं आकर्षक पाउन कि. आफ्नो राशि तल हस्ताक्षर र तिमी सबै कहिलेकाहीं तपाईं आफ्नो नजर हुनेछ लगाउने सक्छ लागि विचार प्राप्त खोज्नुहोस्.
तपाईंको Aries मिति आगो संकेत को fieriest छ, जो तिनीहरूलाई रंग रातो राम्रो प्रतिक्रिया बनाउँछ. रातो अधिक उज्ज्वल र जीवन्त, राम्रो. तिनीहरू पनि आफ्नो शरीर हेर्न चाहन्छन्, त्यसैले आफ्नो शरीर को सबै भन्दा राम्रो भागहरु accentuates कि लुगा लगाउने. तपाईं एक ठूलो शरीर छ भने, तपाईं अपूर्व लुगा जाने. तिनीहरूले तपाईं सुपर तातो चाहनुहुन्छ.
तपाईं Taurus मिति एक व्यावहारिक पृथ्वीमा चिन्ह छ, त्यसैले तिनीहरू परम्परागत पहिरन रुचि गर्छन. देखाउन छाला को एक क्षेत्र छान्नुहोस्, र कवर बाँकी राख्न. मेकअप हुनुपर्छ प्राकृतिक-देख, गरगहना सुन्दर पत्थर को पूर्ण हुनुपर्छ. यो चिन्ह प्रकृति मा सामान्य रंग राम्रो जवाफ, मौन साग वा खैरो जस्तै पृथ्वी रंग. अधिक तपाईं एक पृथ्वीमा परमेश्वरको / देवी रूपमा भर आउन, राम्रो.
तपाईंको मिथुन मिति चंचल र मजा छ, यति कुरा मा पहिरन प्यारा र एक सानो आधुनिक. एक हावा चिन्हको रूपमा, होइन के मा छ र के उनि संग राख्न मन. तिनीहरू एक बच्चाको जस्तो व्यक्तित्व हुन सक्छ, त्यसैले तिनीहरू हुनुको बच्चाहरु / किशोरीहरूको सम्झना कुरा राम्रो प्रतिक्रिया सक्छ, plaid स्कर्ट र विश्वविद्यालय सुट जस्तै. उज्ज्वल लगाएका प्रयास, आफ्नो मन प्रोत्साहित मजा रंग.
तपाईंको क्यान्सर मिति सान्त्वना चिन्ह छ, त्यसैले तिमीलाई केहि मा पनि बाध्यकारी पोशाक छैन, पनि उच्च निको पार्छ लगाउने, वा तपाईं यो संग चञ्चल राख्नेछु भने एक टाई धारण. तपाईं लगाएका छन् के तपाईं पूर्ण आराम हुनुहुन्छ भने, कि तिनीहरूलाई भर आउन छौँ. उज्ज्वल रंग जोगिन प्रयास, वा बाहिर त्यहाँ साँच्चै जंगली छ र केहि कि उनलाई दूर तर्साउन सक्छ.
तपाईंको लियो मिति तिनीहरूले कोठा मा सबै भन्दा तारीख छ जस्तै महसुस गर्न चाहनुहुन्छ, एक सबैलाई आफ्नो आँखा छ, त्यसैले यसलाई glam. तिनीहरूले तपाईं गर्न सक्छन् तपाईं रूपमा आकर्षक हेर्न चाहनुहुन्छ. तपाईं पनि भडकीला / चिपचिपा सीमा हुन सक्छ. गहने मा पत्र – अधिक bling, राम्रो. यो ध्यान आकर्षित किनभने तिनीहरू लाल मन, र सुन र बैजनी तिनीहरूले राजकीय रंग छौं देखि.
तपाईंको कन्या मिति डिजाइनर लुगा वा हैंडबैग वा कुनै पनि बारेमा धेरै परवाह छैन. तिनीहरू सबै भन्दा ठूलो चासो तपाईं राम्रो गंध छ छौं, स्पष्ट पहिल्यै एक स्नान गरे, र पनि धेरै hairspray लगाएका छैनन्, मेकअप, वा एक गुडिया जस्तै हेर्न. स्वच्छता चिन्ह लागि नम्बर एक. आफ्नो संगठन सरल, चिकना, र तटस्थ रंग गर्न छडी. तिनीहरूले सजिलै विचलित छौं, यति उज्ज्वल रंग तिनीहरूलाई चिन्तित बनाउन.
तपाईंको तुला मिति सबै राशि संकेत को सबै भन्दा फैशनेबल छ, त्यसैले तपाईं एक निशान यसलाई लात छ. ती डिजाइनर लुगा बाहिर तान्न र एक सुन्दर राख्न, आधुनिक नजर. यो चिन्ह कला शासन, जो तिनीहरूले फैशन छौं किन छ, र तिनीहरूले सँगै र स्टाइलिश हेर्न आशा. तिनीहरूले गहना टन मन, सामान, र सुन्दर गहना, तर यो पनि धेरै छैन.
तपाईंको वृश्चिक मिति अँध्यारो शासन चिह्नको छ, यति गाढा रंग लागि जाने. तपाईं टाउको-गर्न-खुट्टा कालो बन्द पुल गर्न सक्छन् भने, यसको लागि जाने. तिनीहरूले तपाईं दासत्वबाट तिनीहरूलाई सम्झना कि तंग भेषमा तर ढाकछोप मन (यस चिन्ह नियन्त्रण विषयहरूमा छ). एक धुवाँ आँखा जानुहोस्, आँखा प्राण विन्डो हो र तिनीहरूले तीव्र तपाइँको मा चियाउने चाहनुहुन्छ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ.
तपाईंको धनु पाल्तु जनावर फेसन र लुगा मा सामान्यतया कि छैन, तर तिनीहरूले तपाईंलाई राम्रा हेर्न चाहन्छन्. तिनीहरूले उज्ज्वल रंग मन र यो एउटा कथा छ कि लुगा वा गरगहना प्रेम. यात्रा गर्दा तपाईं मिल्यो भने, वा केही अनौठो परिस्थितिमा माध्यम ले आफ्नो सम्पत्ति मा आए, यो मा फेंक र यो रोचक कुराकानी स्रोत हुन गरौं. तिनीहरूले तपाईं रोचक * पा अन्त छौँ.
तपाईंको मकर मिति सबै राशि संकेत सबैभन्दा परम्परागत छ, त्यसैले परम्परागत संगठन गर्न छडी. महिलाहरु, आफ्नो LBD बाहिर तान्न; मर्द, कि सूट समातेर टाई. दूर उज्ज्वल रंग देखि रहनुहोस्, र अँध्यारो तटस्थ गर्न छडी, विशेष गरी खैरो र कालो. तपाईं एक राजनीतिक चाड गर्न जाने लुगा लगाउँछु चाहन्छु कसरी बारेमा सोच्नुहोस्, र तिनीहरूले तपाईं हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईं कसरी असल विचार दिन्छु.
तपाईंको Aquarius मिति सबै राशि संकेत सबैभन्दा अपारंपरिक छ, त्यसैले आफ्नो नजर खेल्न मुक्त महसुस र विभिन्न कुरा प्रयास. रङ आफ्नो कपाल नीलो वा गुलाबी, गर्व कि भौं वा पेट बटन भेदी टाउट, वा आफ्नो रिसाइकल सोडा बोतल गहना लगाउने. तिनीहरू वर्तमान रुझान परवाह छैन, मात्र भविष्य व्यक्तिहरूलाई, त्यसैले अहिले मा के नहिंड.
तपाईंको मीन मिति रोमान्टिक परम छ, तपाईं रोमान्स उपन्यास को कवर मा वा रोमान्टिक फिलिम मा एक संगठन देखेका छौँ भने त, यो काम गर्न सक्छ. तिनीहरूले ruffles मन, प्रवाह र आन्दोलन संग टुक्रा, लेस, र यदि तपाईं यो आफैलाई गरे, अझ राम्रो. तिनीहरूले यद्यपि आकस्मिक पालन आपत्ति छैन, र जिन्स र एक राम्रो शर्ट पर्याप्त सक्छ. आफ्नो मनपर्ने रंग pastels हो.